Juventus Oo 4-gool Ugu Awood Sheegatay Kooxda Catania.
Kooxda Juventus ayaa afar gool iyo waxba uga badisay kooxda Catania, oo marti ugu aheyd garoonkeeda Juventus Stadium.
Juventus oo todobaadkii hore guuldarooyin ka soo gaartay Seria A iyo Champions League ayaa hada kaalinta 3aad ku jirta, iyadoo dhibcaha la wadaagta kooxda Napoli.
Goolasha ayaa waxaa u dhaliyay Juventus xidigaheeda Arturo Vidal oo daqiiqadii 26aad goolka u bilaabay iyo Andrea Pirlo oo daqiiqadii 34aad u dhaliyay ee qeybtii hore ee ciyaarta
Labada gool kale waxay dhasheen qeybtii labaad, waxaa u kala saxiixay Carlos Tevez iyo Leonardo Bonucci
Kooxda Roma ayaa wali la celin la’yahay, waxaana ay dooneysaa inay gaarto guusheeda 10aad ee isku xiga ee Seria A-da, iyadoo badisay sagaal kulan, waxaana ay horyaalka ku hogaamineysaa 27-dhibcood.
Dhinaca kale kooxda Napoli ayaa labo gool iyo gool uga adkaaday kooxda Fiorentina, Napoli ayaa wali ku jirta qaab ciyaareed wanaagsan.
Kaka Oo Goolkiisa U Horeeyay Dhaliyay, Xilli AC Milan Bar Bar Dhac la gashay Lazio.
Kooxda AC Milan ayaa bar bar dhac lagula qabtay garoonkooda San Siro, oo ay marti ugu aheyd kooxda SS Lazio, ciyaar aad u xiiso badneyd, iyadoo bar bar dhacan uu xaalka ku sii cusleynayo Tababare Massimiliano Allegri.
Ciyaaryahan Kaka oo dib ugu soo laabtay San Siro bishii September ee sanadkan ayaa goolkiisa u horeeyay u dhaliyay, kaasoo ahaa mid kooxdiisa hogaanka ciyaarta ugu qabtay daqiiqadii 54aad.
Laakiin goolkaas ma aanu u suura gelin in kooxdiisa saddex dhibcood ugu keeno garoonkooda San Siro, ha yeeshee daqiiqadii 72aad ayaa waxaa Lazio u bar bareeyay Michaël Ciani.
Ac Milan ayaa kaalinta 12aad ee horyaalka Seria A ku jirta, waxaana ay xilli ciyaareedkan ay ku bilaabatay qaab aad u hooseeya.
Xidiga reer Brazil Kaka oo kulankiisa labaad ku ciyaaray San Siro ayaa wax badan laga sugayaa inuu ka bedelo kooxdiisa Milan, iyadoo ciyaaryahankan uu dib ula soo laabtay qaab ciyaareedkiisa wacnaa ee kooxda horay guulo ugu horseeday
Manchester City Oo Iska Xaadirisay Wareega Quarter Final Capital One, Kadib Markii Ay Ka Badisay Newcastle.
Goolal ay kala dhaliyeen Alvaro Negredo iyo Edin Dzeko waqtigii dheeriga ee ciyaarta ayaa u sahlay Manchester City inay u soo baxdo Quarter Final-ka Koobka Capital One, markii 2 iyo waxba ku suul daareen Newcastle.
Labada kooxood ayaa wax goolal ah iska dhalin waayay sagaashankii daqiiqo ee ciyaarta, waxaana taas keentay in lagu daro 30-daqiiqo dheeri ah, si lagu kala baxo.
Ciyaaryahan Alvaro Negredo ayaa daqiiqadii 9aad ee 15-ka daqiiqo ee hore waqtiga dheeriga u dhaliyay gool, kaasoo neefta ka fujiyay taageerayaasha kooxda.
Gool labaad ayaa waxaa u dhaliyay Edin Dzek daqiiqadii 15aad ee ciyaarta, waxaana goolkaas noqday mid hogaanka ay ku soo xajisteen.
Manchester City ayaa iska xaadirisay wareega Quarter Final-ka oo ay u soo gudbeen kooxaha Manchester United, Chelsea, Tottenham oo ah kooxaha kaliya ee ugu waa weyn, iyagoo ku aadi doona.
Hadaba kooxaha ayaa wareega sideeda sidan isugu aaday kooxda Manchester United ayaa la ciyaari doonta kooxda ay xafiiltamaan ee Stoke City, halka Manchester City ay ka hortagi doonto Leicester City.
Sidoo kale kooxda Tottenham ayaa ku aadi doonta West Ham oo ay wada xafiiltamaan, isla markaana ka wada dhisan yihiin magaalada London.
Chelsea ayaa iyana wareega sideeda ee Quarter Final-ka la ciyaari doonta kooxaha Southampton iyo Sunderland tii badisa.
Rafa Benitez: Jupp Heynckes Ayaa U Qalma Inuu Ku Guuleysto Abaalmarinta Tababaraha Sannadka.
Tababaraha Napoli Rafael Benitez ayaa aaminsan in Jupp Heynckes inuu u qalmo inuu ku guuleysto abaalmarinta tababaraha sannadka adduunka.
Macalinka reer Spain ayaa ka mid ah 10ka mushahar ee abaalmarintan u sharaxan ka dib markii uu Europa League la qaaday Chelsea xilli ciyaraeedkii hore, waxaana uu si wacan ku bilowday shaqadiisa cuusb ee Napoli.
Si kastaba, Benitez ayaa dareensan in Heynckes oo Bayern Munich ka tagay xagaagii ka dib markii uu kooxda Jarmalka ku hogaamiyay seddexda koob, inuu u qalmo.
“Waa in Jupp uu helo abaalmarintan” ayuu tababarihii hore ee Liverpool u sheegay suxufiyiinta.
“Waxa uu ku guuleystay wax walba xilli ciyaareedkii hor intii uu joogay Bayern, waxaana uu tusaale fiican u yahay xirfada shaqadaan.”
Kooxda Benitez ee Napoli ayaa kaalinta labaad kaga jirta Serie A, waxaana ay caawa marti u yihiin kooxda Fiorentina.
Felipe Scolari Oo Si Carro Leh Uga Jawaabay In Diego Costa Uu Doortay Xulka Spain.
Luiz Felipe Scolari ayaa ku weeraray Diego Costa inuu dusha xijiyay wadankii uu ku dhashay ee Brazil islamarkaana uu doortay inuu u ciyaaro xulka qaranka Spain.
Weeraryahanka Atletico Madrid ayaa labo kulan u saftay Brazil laakiin madaama ay labadaas kulan ahaayeen kuwa saaxiibtinimo, waxa uu xor u yahay inuu u ciyaaro Spain madaama dhalashada Isbaanishka uu qaatay bishii July.
Costa ayaa looga soo yeeray xulka Brazil ee kulamada saaxiibtinimo la ciyaarayaa bisha soo socota xulalka Honduras iyo Chelsea, laakiin shalayto waxa uu si rasmi ah u shaaciyay inuu doortay Spain, taasoo ka careysiisay Scolari islamarkaana ku qasabtay inuu islamarkiiba ka saaro xulkiisii ugu danbeysay
“Ciyaaryahan Brazil ah oo diiday inuu xirto maaliyada xulka qaranka Brazil islamarkaana Koob Adduun ku ciyaara wadankiisa isweydiin la’aan ayaa looga saarayaa xulka” ayuu Felipao ku sheegay warbixin uu soo saaray.
“Waxa uu dusha aadiyay riyada malaayiin dooneysa inay xulka qaranka u ciyaaraan, xul shan jeer ku guuleystay Koobka Adduunka, islamarkaana Koobka Adduunka lagu qabanayo Brazil.”
Real Madrid Oo Dooneysa Inay Benzema Iyo Kaash Ku Soo Bedelato Suarez.
Wargeyska Daily Star ayaa qoraya maanta in Real Madrid ay qorsheyneysa bisha Janaayo inay u dhaqaaqdo weeraryahanka Liverpool Luis Suarez.
Jariirada ayaa qoreysa in Real Madrid ay u soo bandhigi doonto kooxda Premier League ka ciyaarta 20 milyan ginni oo kaash ah iyo Karim Bezema.
Warbixinta ay qortay wargeyskaan waxa ay ku xuseen in Suarez uu weli doonayo inuu ka tago Anfield, islamarkaana uu qalbiga gashaday inuu u dhaqaaqo Santiago Bernabeu.
Real Madrid waxa ay ku qiimeyneysaa Benzema 20 milyan ginni taasoo qiimaha guud ka dhigeysa 40 milyan ginni sida jariirada ay sheeganeyso.
Kooxda reer Spain ayaan awoodin inay bixiyaan lacag gaash sidaas u badan madaama ay xagaagii 100 milyan euro ku qarashgareeyeen Gareth Bale, sidaasi darteed heshiis kasta oo dhaca waxa ay ku xiran tahay Benzema inuu doonayo inuu u ciyaaro Liverpool.
Soomaaliya oo ka adkaatay Zambiya :Perth world cup 2013 “SAWIRRO
Iyadoo magaalada Perth ee galbeedka dalka Australia uu ka soconayo tartanka Perth World cup 2013 ayaa cayaartoyda dalka Soomaaliya u meteleysa tartankaasi waxay gaareen guul weyn,kadib markii ay garaaceen dhigooda Zambia oo ay kuwada jiraan Group-ka B.
Ciyaaryahanada ku ciyaaraya magaca Soomaaliya ayaa kulankii koowad si dirqi ah 1-0 looga badiyey markii ay la ciyaareen kuwa Brazil oo dadkii daawanayey kulankaasi ay khireen in Somalidu u qalmeen inay guuleystaan ciyaar wanaagii ay soo bandhigeen marka la eego.
Kulanka Somalia ay kala hortagtey Zambia ayaa waxaa uu ku bilowdey dar-dar weerar iyo weerar celis iyadoo Tababare C/Xakh uu saxaafadda dalka Austrelia u sheegay in kooxdiisu aad u diyaarsan tahay ayna guul ka rajeynayaan guud ahaan kulamada Groupka ee haray.
Daqiiqadii 13-aad ee qeybta hore ayaa xidigaha Soomaaliya u suurta gashey inay helaan Gool, kaasi oo uu saxiixey ciyaaryahanka khadka dhexe oo lagu naaneyso Medamo,laakiin isla qeybtii hore daqiiqadii 35-aad ayey Zambiyan-ku heleen goolkii bareejada oo 1-1 ayaa lagu kala nastay qeybta hore.
Markii dib loo soo laabtay ayuu tababare Cabdull-Xakh oo la tashanaya Team Manager Ibraahim Axmed wuxuu sameeyey bedel,isagoo soo geliyey ciyaaryahan weerarka ka dheela oo lagu magacaabo Ayaanle kaasi oo daafacyada Zambia celin waayeen ilaa ay ku jalaafeen diilinta ganaaxa dhexdeeda,sidaasina gool-ku laad ay heleen Somaliya waxaa Gool u bedelay ciyaaryahan C/laahi Salaad oo katirsan ciyaaryahanada dheesha horyaalka sare ee A-league.
Intaasi wixii ka danbeysey oo ay xidigaha Somaliya hogaanka u hayeen ciyaarta,ayaa waxaa daqiiqadii 68-aad goolkii 3-aad u saxiixey Ayaanle oo halkaasi ku rafiyey daafacyadii xooga badnaa ee Zambia,oo ugu danbeyntiina dhamaadkii kulanka goolkii 4-aad uu ka xareeyey xidigii bilaabay goolasha ee Medamo sidaasina Somaliya 4-1 kaga adkaatey Zambia kulankii 2-aad ee tartanka caalamiga ah ee Perth Soccer World Cup 2013.
Gudoomiyaha Xulka Somalia Ibraahim Axmed ayaa dhamaadkii ciyaarta saxaafadda u sheegay in guushan ay bilow u tahay dadaalka ay doonayaan inay koobka ku qaadaan oo ay soo gaaraan kama dambeysta tartanka,isagoo u mahadceliyey una hambalyeeyey dhamaan Soomaalida ku nool gudaha Austrelia iyo caalamka intiisa kale oo guushaasi la qeybsanayaan.
“Kooxda waxaa leylinaya Manager fiican oo heerka ugu sareeya gaarsiiyey kooxo dhowr ah,anigana hore sanadkii 2009 ayaan la shaqeeyey oo aan u ahaa ku-xigeen xiligaa oo aynu ku guuleysaney qeybta juniorka oo Somaliya qaadey koobkii a waxaan rajeyneynaa inaan ku guuleysano hadii eebe uu aqbalo”ayuu raaciyey.
Xidigaha Somaliya oo iminka 3-dhibcood leh,ayaa kulankooda ugu soo horeeya waxay 5-ta bisha November la yeelanayaan Xulka Chile,iyadoo dalalka Seria Lione,Italia,Greece,Croatia iyo dalal kale ay ku jiraan Group-ka.
Van Persie Iyo Shawcross Oo Isku Dhacay Labo Jeer Xilligii Nasashada Iyo Dhamaadkii Kulankii Sabtida.
Robin van Persie ayaa qeyb ka ahaa labo jeer oo ay isku dhaceen kabtanka Stoke City Ryan Shawcross tunel-ka Old Trafford dhexdiisa.
Isku dhacii hore ayaa yimid iyadoo ciyaartoyda ay u sii socdeen qolalkooda labiska xilligii nasashada, iyadoo Shawcross uu kala tuuray weeraryahanka Man United.
Waxaana ay mar kale isku dhaceen oo ay hadal kulul isdhaafsadeen markii ciyaaryahankii hore ee United Shawcross uu wareysi bixinayay ciyaarta ka dib.
Dareenka xun ee soo kala dhexgalay labada ciyaaryahan ayaa bilowday markii Shawcross uu dhuunta ka qabtay RVP intii ay socotay kulankii sabtida.
Labada nin ayaana la arkayay iyagoo murmaya markii ay garoonka ka baxeen, waxaana wax walba ay kululaadeen markii ay tunnel-ka dhexdiisa galeen.
Macalinka Stoke Mark Hughes ayaa yiri: “Ryan waxaa jaale lagu siiyay qolka labiska dhexdiisa, mana ka warqabo sababta.
“Hore uma arkin weli qof jaale lagu siinayo qolka labiska.”
Ka dib markii United ay ku badisay 3-2, Shawcross ayaa bixinayay wareysi markii Van Persie uu soo agmaray isagoo ereyo isaga ku aadan si hoose u dhahaya.
Goob jooge ayaa u sheegay The Sun: “Ma aysan cadeyn waxa uu yiri RVP laakiin Shawcross kuma uusan faraxsaneyn gabi ahaanba. Waxa uu weydiiyay Robin inuu ku soo celiyo wixii uu yiri labo jeer laakiin RVP waa uu iska sii socday.
“Labada nin ayaa colaadooda ay soo bilaabay markii RVP uu joogay Arsenal, sidaasi darteed waxaa laga yaabaa inay taasi dib u soo noolaatay.”
RVP ayaa casaan qaatay kulan uu ka horyimid Stoke 2008dii, halka Shawcross uu lugta la jabiyay Aaron Ramsey 2010kii.
Daniel Sturridge Oo Sheegay In Talo Uu Xagaagii Ka Helay Drogba Inay Ka Dhigeyso Xiddig Ka Fiican Sidii Hore.
Daniel Sturridge ayaa sheegtay in qaab ciyaareedkiisa wanaagsan ee uu ku bilowday xilli ciyaareedkan inay qeyb ka mid ah ka timid talo uu xagaagii siiyay Didier Drogba.
Weeraryahanka Liverpool ayaa ku jira qaab ciyaareed aad u wanaagsan isagoo sabtidii shabaqa ka soo taabtay West Brom, waxaana goolashiisa xilli ciyaareedka ay marayaan haatan 10 gool tartamada oo dhan.
24 jirkaan ayaa daaha ka qaaday in wada sheekeysi uu la yeeshay saaxiibkiisii hore ee Chelsea xagaagii inuu ku faa’iday.
Isagoo u hadlayay jariirada The Times, Sturridge ayaa yiri: “Waxaan Didier ku arkay Miami xagaagii.
“Waxa uu ii sheegay waxa ugu xoogan ee uu shaqsi heysan karo inay tahay qalbi xoogan.
“Waxa uu igu yiri, ‘Ma ahan taatiko, mana ahan farsamo, mana ahan awood jir ahaaneed. Haddii aan naftaada aaminto taas ayaa ka sarre marineysa qof walba’ “
Pellegrini Oo Diiday Inuu Taageero U Muujiyo Goolhaye Joe Hart.
Manuel Pellegrini oo careysnaa ayaa diiday inuu taageero Jose Hart ka dib goolkii uu Fernando Torres ka dhaliyay daqiiqadii ugu danbeysay ee kulankii xalay taasoo uu qalad weyn ku lahaa goolhayaha reer England.
Hart ayaa goolkiisa ka soo baxay xilli Nastasic uu u soo dhigayay kubad baas madax aheyd, taasoo keentay in Torres uu kubada helo islamarkaana shabaqa cusjiyo.
Waxaana ay taasi aheyd qaladkii ugu danbeeyay ee uu sameeyay goolhayaha reer England kaasoo sidoo kale ceeb ay ka soo gaartay goolkii guusha ee Andreas Weimann uu ka dhaliyay kulankii Aston Villa, waxaana uu sidoo kale qaladaad goolhaye sameeyay kulamada Scotland, Cardiff iyo Bayern Munich.
Pellegrini ayaa yiri: “Waxaa nala garaacay seddex kulan oo aan marti aheyn, waxaana dhamaantood naga dhashay goolal aysan u qalmin kooxaha kale.
“Waxaan dhumineynaa dhibco doqonimo ah. Dhamaan seddexdaas kulan inaga ayaa sabab u aheyn goolasha ay dhaliyeen kooxaha kale.
“Aniga ayaan qiimeeya ciyaartoyda, ee saxaafada ma ahan. Isaga weydiiya sida kalsoonidiisa ay tahay. Laga bilaabo berri waxaan fiirin doonaa sida ugu fiican ee aan wax ku bedeli karno.”